ikhaya » Okufumaneka » I-Juggernaut Q & A: Umsindo ode kwi-VFX impumelelo
I-Juggernaut Q & A: Umsindo ode kwi-VFX impumelelo
Ngabathengi njengeBubisoft, i-Walmart, i-Disney ne-Coca-Cola, i-Juggernaut inomdla wokufikelela kwihlabathi njenge-VFX.
Isekelwe eToronto, iqela lidala imifanekiso eqingqiweyo yokuthengisa, ifilimu, ukusasazwa, ukudlala, imicimbi kunye nokunye. Sahlala phantsi ngengxoxo kunye noMlawuli oyiCalig Small ukufumana ukuba yini eyenza uFrankie ubaluleke kakhulu kuloluhlu lwabaculi abaphumeleleyo.
Nceda usixelele ngokufutshane malunga nawe kunye nemvelaphi yakho.
Ndaqalisa umsebenzi wam ngokulala ngendlela kwiCBC (iCanada Broadcasting Corporation) kwi-1991. Kwakuyimimiselo yeelwimi ezimbini - ndandingazange ndibe neBakala le-9 lesiGrike. Okubonakala kubonelelekile ukuba umsebenzi ondiwenzayo kwiminyaka eyi-25 elandelayo yayininzi kwiintengiso. Ndandinomnqweno wokuba ngumtsalane, umculi wezinto ezibonakalayo, kunye Umenzi wefilimu Kodwa andinayo imonde esikolweni. Kunoko, ndasebenzisa izibonelelo kwiCBC kwaye ndafunda emsebenzini.
Ndandixhoma kunye nale mibonakaliso yabadala be-graphic designers eyayingqonge ukusukela kwi-1950-baxoshelwa bucala ukuba benze indawo yokusebenzela entsha ye-Silicon Graphics eyathatha indawo yabo yokubhukuda kwaye, ekugqibeleni, ibagxotha emsebenzini. Ndandidla ngoxhomekeke kude kube yilapho i-3 ndifundisa indlela yokusebenzisa nayiphi na into endiyifumana ngayo - I-Quantel Paintbox, i-Parallax Madador, i-Abekas DDRs, i-Chyrons, i-Lightboxes, i-Avids - izixhobo ongazifumani ngazo zonke iindawo, nokuba . Kwakungendawo enkulu yokusebenzela nokufunda.
Kanye nokubona ukupakishwa okubomi kwezingane kwiHolo, enye yeenzuzo zokusebenzela umsasazo wabambisene wabaqinisekisiwe ngodliwano-ndlebe kuwo wonke umsebenzi owamfaka isicelo. Ekugqibeleni ndahamba ngokuzenzekelayo, ndivelise imifanekiso yenkcazo kunye nemiboniso yemboniso yeefilimu kunye neTV. Ndigqityile ukulawula iintengiso ezininzi, iividiyo kunye neempawu zee-arhente ze-A kunye nee-studio zokuvelisa. Kwaphela iminyaka engaphezu kweshumi, ndasebenza nakwizakhiwo eziliqela eziphezulu kunye nokuthumela izindlu ngeToronto, ngaphambi kokusekwa ngokubambisana kweJuggernaut kwi-2002.
Yintoni eyona nto ikhethekileyo yeFrankie projekthi yakho?
Umdlalo omkhulu weViyoft umdlalo weVideo uqeshe ukuba sikhiqize i-cinematic yokuvula yabo IFrancry game franchise. Sasinamalungu ekomiti kunye nabaxhasi basasazeka kwihlabathi lonke - iToronto, iMontreal, eNew York, eBelgium - ngoko ndasebenzisa uFrankie ukuba wonke umntu adibanise, ukusuka kwisigaba sebali ukuya kwesithuba sokugqibela.
Kwiiveki ezimbalwa kwiprojekthi, ndaye ndafumana elinye lala maxesha 'WOW'. Ndandihleli ebhasini elixubileyo, xa ndifumene isicelo sokugqibela sokuhlaziywa komsebenzi. Ndayibamba i-laptop yami kwifowuni yam kwaye ndahamba nabantu abahlanu, ukusuka kwimimandla emine eyahlukeneyo, kwiiseshoni ezikude zeFrench. Umntu ohleli kufuphi nam engazange azi ukuba kwenzekani. Kupholile kangakanani loo nto?
Kubaluleke kangakanani ukusebenzisana okude kumbhobho wakho?
Sisebenza kunye nabaninzi bee-freelancers kunye nabathengi abavela kwihlabathi lonke, ukusebenzisana okude kubalulekile ekusebenzeni kwethu njenge-imeyile. Okanye ikhofi.
Unokuhlangabezana njani nemingeni yomnqophiso omiselweyo? Ngaba unayo naziphi iindlela zokunceda uhlale kwindlela?
Ndiyifumene isicwangciso esilungileyo kukuphepha. Ndicinga ukuba kulungile ukuyeka umsebenzi onomngcipheko 'wokukhawuleza' kwaye ugweme umngcipheko wokonakalisa idumela lakho ngokunikezela phantsi. Ukuba unikwe iphrojekthi ekhangayo enebhajethi enempilo, kodwa ixesha eliqinileyo eliqinileyo, ukuqesha abantu abaninzi - musa ukuhaha. Yazi imingcele yakho kwaye ugweme ukufumana i-pigeonholed njenge-studio (okanye umntu) ethatha iiprojekthi ezingenamsebenzi okanye imali. Thumela abo bathengi kumncintiswano wakho.
Ngaba bekukho uhlobo oluthile lukaFrankie owamkela ngokukhawuleza?
Andikwazi ukucinga nje Enye nantsi ke ikhefu lam elevator ukuya ku-Frankie newbie ....
ME: Ndiza kukumema wena kunye neqela lakho ukuba nisebenzise le sixhobo esibude sokubukela ividiyo esibizwa ngokuba nguFrankie. Iyamangalisa. Ndiya kukwazi ukuhamba ngeemboniselo ezininzi ukusuka kwiprojekthi, ngexesha langempela. Sonke siya kulungelelanisa kwaye sigxile kwisakhelo esifanayo sazo zonke iziqendu.
UMKHULU: Ndiyathanda. Isebe lethu le-IT lisincede. Kuthatha iiveki ezimbini ukufumana ifayile entsha efakwe kwiikhomputha zethu. Nokuba i-mobile yami ishiyiwe-phantsi.
ME: Hayi! UFrankie ngumsebenzisi wesiphequluli! Chofoza nje umnxeba uze wenze.
UMCWADI: Wha ... ??!
ME: Ewe. Nabani na onokuthatha ukulawula kwiseseshoni nganoma naliphi ixesha kwaye ahlasele ngevidiyo. Sonke siya kuhlala sivumelanisa. Ekupheleni kweseshoni onke amanqaku ethu, amanqaku, kunye nezichasiso zihlanganiswa kwi-PDF eneempawu ezininzi, kunye nezothumbisi zexesha. Ithumela nge-imeyile ngokuzenzekelayo kuwo wonke umntu kwiseshoni. Oo, uFrankie usebenza kwiixhobo eziphathekayo.
UMKHULU: UCraig, ungumongameli! Unokuzinikela kwethu okungapheliyo kunye nokubonelela okungapheli komsebenzi ohlawulelwayo.
Njengomlawuli olawulayo, ucinga ukuba yintoni indlela engcono yokunika ukugxekwa okomelezayo kwiingcali zakho?
Ndandidla ukucinga ukuba indlela yokudumisa is sandwich yayilungileyo. Uyazi, ukuncoma-ukugxekwa-ukuncoma. Ngokuqinisekileyo ndakhetha ukufumana olu hlobo lokugxekwa xa ndimncinci, kunokuba lube luhlu lokuhlamba iimpahla ezandenza ndandiziva ndidityaniswe kwaye ndishukunyiswa. Kodwa ekugqibeleni waqala ukuziva engacatshangwanga. Ndandivumba i-sandwich yokudumisa ukusuka kwikhilomitha: "UCraig, ungumculi onetalente kakhulu. Le nto uyenzile apha nenyana, udidekile. Mna, yintoni umgcini onxibayo. "Ndiyicinga ukuba unomphumo onqwenelekayo wokunciphisa, kodwa ingxaki kukuba abanye abantu bayayiva indumiso-ke ukugxeka kungcwatywa okanye kulahlekelwe ngokupheleleyo.
Abaculi banjengabantwana, abancinci, abanamava badinga ukuphathwa ngokucokisekileyo, benokudumisa ngokubanzi ukugxeka. Abo banamava kunye neetalente banamathuba okuzithemba ngakumbi kwaye bathatha ukugxeka ngokwabo, oku vumela ukuba ndiqondise ngakumbi. Ngamanye amagama, phatha izinto zakho ezibucayi njengokuba uza kubantwana bakho, ngabanye kunye nangothando oluninzi.
Ufikeleleka njani ufumana ukusebenza nge-browser?
Ndiyayithanda i-web apps - iyinto yonke, ngoko andinakufuna ukufakela ezininzi okanye ilayisenisi kuwo onke amadivayisi. Bahlaziya ngokuzenzekelayo kwaye idatha yam ihlala efini, eyenza intsebenziswano okanye ukufikelela ekude kufumane umoya.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkundla ye-Ultra HD Injini yeVidiyo	2017-05-19
Previous: I-teknoloji iqhuba nganye iCandelo le-M & E kwi-NAB
next: URoger Ailes, uMongameli weendaba zeFox, uyafa
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "I-Juggernaut Q & A: Umkhosi ode kwi-VFX". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/the-juggernaut-qa-a-far-cry-from-vfx-success/. Enkosi.